(Akhriso):-Diyaarado milateri Oo iska Dega Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade oo aan la Aqoon waxay sidaan. – Hareerley News
Wasiir Shaqada iyo Shaqaalaha Sadiiq Warfaa”Waxaan heynaa Mashruuc lagu badbaadinayo Bulshada”
Dowlada Soomaliya Oo Hay’adaha samafalka ka dalbatay ka jawaabida Fatahaadaha
Justin Trudeau oo markale ku guuleystay doorashada Canada
Dowlada Federalka Somalia: “Warbaahinta madaxa bannaan waxa ay heshiis kula jiraan Shabaab”
(Akhriso):-Diyaarado milateri Oo iska Dega Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade oo aan la Aqoon waxay sidaan.
Ka dib burburkii wadanka Soomaliya ayaa noqotey meel bahalo galeen ah taas oo keentey in ay beesha Caalamku ka caawiso la dagaalanka Argagixisada sida Ururka Al shabaab iyo Daacish Oo iyaga haatan ku sii fidaya Soomaliya.
Iyadoo dagaalka lagula jiro Argagixisadu uu qoto dheeraadey hadana laguma guuleysan in laga saaro Soomaliya oo idil iyadoo maandeyka Dowlada FS uu ahaa in ay ka saarayaan gebi ahaanba soomaliya.
Hadaba argagixisada ayaa maalin walba ka geysta wadanka gudahiisa falal bahalnimo ah oo ay ku bartilmaamsadaan shacab birimageydo ah oo aanan is difaaci kareyn.
Si kastaba ha ahaatee Diyaarado badan oo milateri ayaa maalin walba ku soo dega garoonka aadan cade oo aysan baarin Ciidamada kastamka ee garoonka aadan cade amaba ku dhicin iyagoo markaasi Ogeyna Diyaaradahaasi waxa ay sidaan ma jirto Caalamka meel ay ka jirto aan ka aheyn Soomaliya.
Meelahan ay diyaaradahaani degayaan ayaa waxaa ay dabada kula jiraan Xaafada Chelsiya ee anagu aanu u naqaano Xalane.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la gudboon in Ciidamada Amaanka Garoonka Aadan cade ka warheyn karaan waxyaabaha ay sido diyaaradahan degaya maalin walba Garoonka.
Uma maleeynayo in ay jirto qof wax macluumaad ahi ka hayo waxyaabahaan diyaaradahaanu sidaan taas oo soomali badan shaki ka muujiyeen.
Ugu danbeyna waxaan ku soo koobayaa hadalkeyga waa in xukuumadu FS isku dayaan in ay ka helaan Wax macluumaad oo ay diyaaradahani degaya maalin walba garoonka Aadan Cade sidaan ugu yaraan hab si qoraal ah xitaa.
W/Q:- yuusuf Cabdi Xasan home facebook
(Daawo):-Gacal Raasdaay iyo Falanqeynta Siyaasadaha Jubooyinka
Posted on October 4, 2019 October 4, 2019 Author Hareerley News
(Daawo):-Gacal Raasdaay iyo Falanqeynta Siyaasadaha Jubooyinka Halkaan Hoose ka Daawo
Falanqeynta Siyaasadeed Ee Soomaliya iyo La Gorfee Gacal :-(Daawo)
Falanqeynta Siyaasadeed Ee Soomaliya iyo La Gorfee Gacal :-(Daawo) Halkaan hoose ka Daawo
(Daawo):-Ehelada Marxuum Eng.Yariisoow Oo sheegay Dowladda Ingiriisku ay…
Hay’ada QM Oo dib u Eegtey liiska Shaqsiyaad iyo Waliba Ururo Soomaliyeed Mususuqmaasuq lagu heley Oo la Xayirey.